Mialà amin'ny cardigans baoty mba hamoronana akanjo antitra | Bezzia
Maria vazquez | 05/04/2021 18:00 | Inona no hotafiko, fironana
Manana entana ao an-trano ve ianao izay tsy nitafy am-polotaona maro? Tonga ny fotoana handinihana ireo mba hanomezana azy ireo fotoana kardinaly manotra tanana fa isika rehetra dia efa nanana na farafaharatsiny rehetra izay manana ny taona ilaina.
Raha manana ianao dia tsara vintana! Azonao atao ny mamorona fomba fiota fironana ary manome fiainana faharoa an'io akanjo io. Tsy hitahiry entana va ianao? Aza manahy fa tsy hanana olana amin'ny fitadiavana izay tianao amin'ny fanangonana lamaody ankehitriny ianao satria, araka ny nambaranay volana vitsivitsy lasa izay, iray amin'ireo fironana amin'ny vanim-potoana ireo.
Miaraka amin'ny openwork, voninkazo amboradara, pirinty vita amin'ny takelaka na trims mifanohitra. Ireo cardigans vita amin'ny volom-boaloboka fironana amin'ity vanim-potoana ity. Ary amin'ny fironana iray dia azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny fanangonana firavaka lamaody toa an'i Zara, Mango na Asos.
Amin'ny loko tsy miandany na alokaloka pastel malefaka Izy ireo dia hanana andraikitra lehibe amin'ny fitafiana amin'ity vanim-potoana lohataona-fahavaratra 2021 ity. Ary tsy ilaina ny manahirana mba hampifangaro azy ireo amin'ireo. Raha ny marina, ny fampifangaroana azy ireo amin'ny jeans dia ny safidy malaza indrindra eo amin'ireo mpikirakira instagram.
Hevitra hanambatra azy ireo
Pataloha jeans sy kardigan, tsy mila bebe kokoa amin'ity lohataona ity ianao. Mameno ny endrika miaraka amin'i Mary Janes na kiraro ambany volo falifaly T-Bar sy harona tanana, toy ny hataon'i Louisa Durrell, dia hahatratra endrika mitaona fanahy ianao izay tonga lafatra amin'ny fampiasana isan'andro.
Ny cardigans misy valo na openwork amin'ny feo tsy miandany dia tsara ihany koa hanaovana ambonin'ireo akanjo na tampon misy dian-boninkazo. Ary raha te hanana fomba nentanim-panahy tamin'ny fitopololahy ianao dia tsy mila mandeha fotsiny amin'ny zipo kely mirehitra sy kardinaly tady mifanentana, sahy ve ianao?
Ankoatry ny fanampiana anao mamorona fiotazam-boaloboka amin'ity vanim-potoana ity, ireo cardigans ireo tsy misy collar ary mifatotra eo aloha Tena hanampy be izy ireo rehefa tonga ny fahavaratra. Azonay antoka fa hahazo bebe kokoa amin'izy ireo ianao mihoatra ny noeritreretinao. Manaraka ny fironana ve ianao?
Sary - @juliesfi, @maralafontan, @lolo_bravoo, @chloecleroux, @elliiallii, jane_mcfarland, @mirenalos, @audreyrivet, @mariellehaon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Miloka amin'ny cardigans ba nataony mba hamoronana akanjo antitra